Mareykanka oo dalkiisa ka masaafurinaya ku dhawaad 5 kun oo So... | Universal Somali TV
Mareykanka oo dalkiisa ka masaafurinaya ku dhawaad 5 kun oo Somali ah
Mareykanka ayaa shaaciyay in Somaliya ay dib ugu soo celinayaan muwaadiniin badan oo Somali ah, kuwaasi oo qaarkood sharcidaro ku jooga dalka Mareykanka, halka kuwa kalena ay galeen dambiyo kala duwan.
Brendan Raedy, afhayeenka ICE, waaxda fulinta arrimaha socdaalka iyo kastamka ayaa sheegay laga soo bilaabo 1-dii bishan April, 2017 ilaa 4,801 oo Soomaali ah ay heleen amarkii u danbeeyay ee dalka looga soo saari lahaa.
Sidoo kale wuxuu sheegay Afhayeenka in Somaliya ay ku celiyeen 237 ruux oo muwaadiniin Somaliyed ah.
Safiirka Somaliya ee dalka Mareykanka Axmed Cawad, ayaa horay u sheegay inay hayaan xog ku saabsan in Mareykanka uu dalkiisa ka masaafurinaayo Somali gaareysa 4-kun.
Kan-xigaWasiirka Dastuurka oo sheegay inay qa...
Kan-horeShir Looga Hadlayey Tayeeynta Hay’a...
39,263,239 unique visits